Samsung nwere ike imepụta Qualcomm Snapdragon 830 | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ bụ mkparịta ụka ndị a na-arụ na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya na Korea. Nke a bụ ikpe na, dịka mgbasa ozi a ma ama na mba ahụ, o doro anya na Samsung na Qualcomm nwere ike ị na-akparịta ụka na izu ndị na-adịbeghị anya maka nke mbụ lekọta rụpụta nke Snapdragon 830 niile nwere ike iru ahịa. Dị ka ihe ncheta, gwa gị na mgbawa a ga-ahụ maka ịkwaga ihe niile dị na njedebe na 2017.
Otu nsogbu dị na Qualcomm nwere, o doro anya na imepụta ihe ọhụụ Snapdragon 830 dị na akụrụngwa ya na nnukwu ego ọ ga - eme ma ọ bụrụ na ọ chọrọ mgbawa oge. Anyị na-ekwu maka usoro 10 nm, teknụzụ ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị Samsung, ọ dị n'aka ya, iru nkwekọrịta ke imewe nke a processor, ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa.
Amụma, Samsung ga-ahụ maka imepụta ihe niile Snapdragon 830 ibe na-eru ahịa.
Dị ka a kọrọ n'oge ahụ site na Qualcomm, ọhụrụ Snapdragon 830 bụ processor akpọrọ ka ọ bụrụ ọgbọ gbanwere nke 821, aha ya dị ka ihe nhazi kachasị ike n'ụwa. Iji mezuo mgbanwe a, a ga-enwerịrị itu ukwu n'ihe gbasara ikike, nke ga-agarịrị ụkwụ na ntụgharị ọhụrụ nke na-eme ka arụmọrụ ya dịkwuo mma yana ọkachasị oriri ya.
N'ihi nke a, ntinye onwe 10 nanometers dị ezigbo mkpa, teknụzụ emepe ụzọ ọhụrụ na teknụzụ na-arụpụta ihe nhazi. Dị ka nkọwa zuru ezu, gwa gị na, dịka isi iyi nke akụkọ a si dị, taa Samsung nwere ike iji teknụzụ ọ ga - achọ iji rụpụta akara ngosi 5, nke apụtaghị na a ga - eji teknụzụ a na Galaxy ọzọ S8 ma ọ bụ na ụlọ ọrụ Korea, maka imepụta Snapdragon 830, kwụsị iji mgbawa Exynos na ọdụ a, onye nrụpụta mepụtara ma mepụta ya kpamkpam.
Ozi ndi ozo: GSMArena
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Samsung nwere ike ime Qualcomm si Snapdragon 830
Drobo 5C nwere ike ịchekwa data gị niile